शरीरमा खटिरा आउँदा खुर्सानीको लेप ! – Khabar Silo
शरीरमा खटिरा आउँदा खुर्सानीको लेप !
सामान्यतया खुर्सानी भान्सामा अधिक प्रयोग गरिन्छ । कसैलाई खुर्सानीविना खाना नरुच्नेसम्म पनि हुन्छ ।पिरो खान नसक्नेहरुका लागि खानामा खुर्सानीको नाम सुन्ने वित्तिकै पसिना समेत निस्किन्छ । तर, खुर्सानी स्वादका लागि मात्र होइन । यसमा धेरै औषधीय गुणहरु हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । खुर्सानीको औषधीय गुण र प्रयोगबारे यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
शरीरमा स-साना खटिरा आएको खण्डमा कलिलो खुर्सानीको लेप लगाउनाले केहि मात्रामा पोले पनि समस्या ठिक गर्न सहयोग पुग्छ । चिलाउने रोग, दाद तथा लुतो आएको बखतमा तेलमा खुर्सानी खारेर त्यसले मालिस गरे आरम हुन्छ ।
माकुराले छेरोको ठाँउमा उठेको बिमिरालाई हटाउन हरियो खुर्सानी पिसेर लगाउने हो भने तुरुन्त फाइदा मिल्छ । बारुलो, अरिंगाल, बिच्छी तथा माकुरोले टोकेको ठाउँमा तुरुन्त खुर्सानी दल्ने हो बिष मर्छ र सुन्निने सम्भावना कम हुन्छ ।
यसरी लगाउँमा शरीरमा जलन भएपनि बिषको असर विस्तारै हटेर जान्छ ।खुर्सानीले ग्यास्ट्राइटिस ठिक पार्छ भन्ने भ्रममा परी सिमा नाघेर खुर्सानी खानु भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
वास्तवमा ग्यास्टाइटिस पेटमा अधिक अम्लपित्त बढ्नाले हुने गर्छ । अम्लपित्त दाहकरण हुने हुनाले खुर्सानीको दाहले पेटको दाहलाई काटेर ग्यास्ट्राइटिस शान्त भएझैैं भ्रमपूर्ण अनुभव गराउँछ ।
तर, बढ्दो अम्लपित्तलाई काट्न भविष्यमा अरु बढी र अझ पिरो खुर्सानी खानुपर्ने हुन्छ । तातोले तातो काट्ने अपूर्ण सिद्धान्तझैं खुर्सानी खाई ग्यास्ट्राइटिस निको पार्न खाज्नु पूर्णत अस्वस्थकर विधि हो ।
केही अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् कि खुर्सानीको अतिप्रयोगले मानसिक बेचैनी, मनोभ्रम, र अन्तत पागलपनजस्ता समस्या आउने खतरा रहन्छ ।यसको सेवन क्षमताभन्दा थोरै मात्रा पनि बढि भयो भने त्यसले केही समयमा नै पिडादायी अम्लपित्त उब्जाउने सतप्रतिशत सम्भावना रहन्छ ।
८५ प्रतिशत प्रयोग गर्दैनन् अस्थायी साधन
नेपाल सरकारले परिवार नियोजन लक्षित धेरै कार्यक्रम र योजना ल्याए पनि जिल्लाका ८४ दशमलव ६८ प्रतिशत दम्पतीले अस्थायी साधन प्रयोग गर्दैनन् । जिल्लामा रहेका ५२ हजार ८५२ प्रजनन उमेरका महिलालाई परिवार नियोजन साधन प्रयोगधार पु¥याउने लक्ष्य रहे पनि १५ दशमलव २२ प्रतिशतले मात्रै अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कार्यालयका […]
मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग मिर्गाैला (किड्नी) सेटिङमा बिक्री हुने क्रम रोकिएको छैन । दलाल र किन्ने व्यक्तिबीचको आपसी सम्झौतामा मिर्गौला नेपालसहित भारतका विभिन्न अस्पतालमा अवैधानिक तबरबाट बिक्री भइरहेको छ । हालै मात्र राजधानी काठमाडौंमै डाक्टर, अस्पताल सञ्चालककै मिलेमतोमा मिर्गाैला बेचबिखन गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले समाचार लेखेका छन् । […]
एजेन्सी । गाउँ घरमा पाइने सिस्नु सवैलाई थाहा भए पनि फाइदाका विषयमा सवैलाई थाहा नहुन सक्छ। सिन्नुमा पाइने विभिन्न भिटामिनले मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा र्पुयाउने गर्छ। सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे होटल, रेष्टुँराहरूमा महँङ्गो खानाको रुपमा रहेको छ। सिस्नो खानुकाका फाईदा: पाचनमा सिस्नो लाभदायक हुन्छ। रुघाका कारण घाँटी बसेको अवस्थामा, गुद्धद्वार सुन्निँदा, नाथ्री […]
हास्ने बानी बसाउनुहोस्, करोडौं मूल्यको खुशी मिल्छ !